Torolàlana - Hengtai (Hong Kong) mizara Co., Ltd.
Fampisehoana TFT 1,45 santimetatra
Fampisehoana TFT 1,77 santimetatra
Fampisehoana TFT 2.0 santimetatra
Fisehoana TFT 2.2 santimetatra
Fampisehoana TFT 2.4 santimetatra
Fampisehoana TFT 2,83 inch
Fisehoana TFT 3.2 santimetatra
Fampisehoana TFT 3.47 santimetatra
Fampisehoana TFT 3.5 santimetatra
Fampisehoana TFT 3,9 santimetatra
Fampisehoana TFT 4.0 santimetatra
Fampisehoana TFT 4.3 santimetatra
Fampisehoana TFT 5.0 santimetatra
Fampisehoana TFT 5.7 santimetatra
Fampisehoana TFT 6.8 santimetatra
Fampisehoana TFT 7.0 santimetatra
Fampisehoana TFT 7,84 santimetatra
Fampisehoana TFT 8,8 santimetatra
Fampisehoana TFT 10,1 santimetatra
Fanehoana LCD toetra
Module LCD an-tsary
Seho LCD Display
LCD karazana fanabeazana
LCD mpaninjara solika
LCD fitaovana ao an-trano
fitaovana sy metatra LCD
LCD fitsaboana sy fitsaboana
LCD elektronika mandeha ho azy
Fampisehoana OLED 0,96 santimetatra
1.Fampitandremana amin'ny fampiasana ny Module LCD
1-1Fampitandremana ho an'ny herinaratra mijanona: ny hetsika manaraka dia tokony hatao alohan'ny hanokafana na hanamboarana na mametaka ny LCM:
Mitafy fehin-tanana manohitra ny static.
Manao akanjo anti-static.
Ny gorodona manohitra ny static dia azo apetraka, indrindra amin'ny maripana maina sy ambany [hamandoana ambany] tontolo iainana.
Mampiasà kaontenera misy fitaovana anti-static.
1-2 Vonoy ny jiro mandeha alohan'ny fametrahana, ny famafana na ny fametahana ny LCM.
1-3 Mba hisorohana ny olan'ny EMl, azafady mba ampifandraiso tsara amin'ny alàlan'ny fitaovana EMC ny LCM fiarovana.
1-4Ny tsy fitoviana dia tsy maintsy ahitsy amin'ny toe-javatra mety amin'ny VR raha toa ka mihazakazaka amin'ny faritra avo kokoa ny LCM mari-pana.
Ny 1-5 lt dia tsara kokoa raha misy heater natsangana ao amin'ny LCM hanatsarana ny hafainganan'ny fampisehoana amin'ny ambany kokoa mari-pana.
1-6 Mba hialana amin'ny fikororohana ny LCD, azafady aza esorina ny sarimihetsika miaro alohan'ny hametrahana ny LCM.
1-7 Masìna ianao, tazomy ny faritra iasana madio mba hiarovana ny LCM amin'ny potika maloto.
1-8 Azafady aza sokafana ny LCM raha tsy nahomby izy io, izay mety hisy fiatraikany amin'ny fanodinana ny fanadihadiana.
1-9 Mahatsapa ho an'ny ultraviolet, fadio ny fampiasana na ny fiposahan'ny masoandro raha tsy hoe azo ampiharina amin'ny ultraviolet.
1-10 Raha mila mampitombo PIN na tariby fisaka malefaka ianao rehefa miasa, dia tandremo azafady ny welding vokany, toy ny lalan-kely na ny welding tsy mety.
2.Prechiution amin'ny fampiasana modely OLED
2-1-1Ajao ny mampihorohoro tafahoatra ny maodilo na manaova fanovana na fanovana azy.
2-1-2. Aza manao lavaka fanampiny amin'ny takelaka vita pirinty, manova ny endriny na ovao ny singa ao amin'ny modely fampisehoana OLED.
2-1-3 Aza esorina ny maodelin'ny fampisehoana OLED.
2-1-4 Aza ampandehanana ambonin'ilay naoty farany ambony indrindra.
2-1-5 Aza milatsaka, miondrika na manodinkodina modely fampisehoana OLED.
2-1-6Soldering: amin'ireo terminal fotsiny ihany.
2-1-7Storage: azafady mitahiry ao anaty fitoeran-jiro anti-static sy tontolo iainana madio.
2-1-8 Fahita mahazatra ny fampiasana "Screen Saver" hanitatra ny androm-piainany ary Aza mampiasa fanamboarana amin'ny fananganana mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fampiharana tena izy.
2-1-9 Aza mampiasa fampahalalana raikitra ao amin'ny tontonana OLED mandritra ny fotoana maharitra, izay handefasan'ny efijery "efijery" fotoana vokany.
2-1-10 Winstar dia manan-jo hanova ireo singa passive, ao anatin'izany ny R2and R3 adjust resistors. (Ny mpanohitra, ny capacitor ary ny singa passive hafa dia samy hafa ny fisehoana sy ny loko ateraky ny mpanohana hafa.)
2-1-11 Winstar dia manan-jo hanova ny PCB Rev. (Mba hanomezana fahafaham-po ny famatsiana azo antoka, fanatsarana ny fitantanana sy ny fahombiazan'ny vokatra tsara indrindra ... sns misy fiatraikany amin'ny toetran'ny herinaratra sy ny refy ivelany ， Winstar dia manan-jo hanana ovao ilay kinova.)
2-2 Fikarakarana fitandremana
2-2-1 Satria vita amin'ny vera ny tontonana fampirantiana dia aza asiana fiantraikany mekanika toa antsika izany milatsaka avy amin'ny toerana avo.
2-2-2 lRaha ny tontonana fampisehoana! potika noho ny lozam-pifamoivoizana ary tafaporitsaka ny votoatin'ny organika anatiny, tandremo sao mifoka na milelaka ny akora organika.
2-2-3Ifpressure dia ampiharina amin'ny sehatra fampisehoana na ny manodidina ny modely fampisehoana OLED, ny rafitra thecell dia mety ho simba ary mitandrema sao manisy tsindry an'ireo fizarana ireo.
2-2-4. Ny polarizer manarona ny velaran'ny modely fampisehoana OLED dia malefaka ary mora vaky.Mitandrema azafady rehefa mitantana ny maodely fampisehoana OLED.
2-2-5 Rehefa manana tany ny ambonin'ny polarizer an'ny modely fampisehoana OLED, diovy ny tampony. izany manararaotra amin'ny alàlan'ny fampiasana kasety adhesion manaraka.
Scotch Mending Tape No.810 na mitovy aminy
Aza manandrana miaina amin'ny tany velively na mamafa ny tampony amin'ny lamba misy solvent
toy ny etilolotro toaka, satria ny rahona polarizer no ho feno rahona
fa ity ranon-javatra sy solvent manaraka ity dia mety hanimba ny polarizer:
2-2-6 Tazomy tsara ny maodely fampisehoana OLED rehefa apetraka ao anaty ilay modely fampisehoana OLED Fonenan'ny rafitra. Aza asiana adin-tsaina na fanerena be loatra amin'ny modely fampisehoana OLED. Ary aza atao izany Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879768 '' Fampisehoana ihany koa. miareta hentitra ampy ho an'ireo tranga ivelany.
2-2-7 Aza asiana adin-tsaina amin'ireo poti LSI sy ireo faritra mihorona.
2-2-8Aza disassemble na manova ny modely fampisehoana OLED.
2-2-9 Aza asiana fambara fampidirana raha tsy eo ny herin'ny lojika.
2-2-10 Tandremo tsara ny tontolo iainana miasa rehefa manome modely OLEDdisplay hisorohana ny fisian'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny elanelam-potoana.
Aza hadino ny mametraka ny vatan'ny olombelona rehefa mikarakara ny modely fampisehoana OLED.
Aza hadino ny mampiasa fitaovana ampiasaina na hivory toy ny vy vy.
Mba hanakanana ny famolavolana eletricity static dia aza atao ny miasa maina tontolo iainana.
Ny sarimihetsika miaro dia ampiharina amin'ny tampon'ny tontonana fampisehoana ny fampisehoana OLED Mitandrema satria mety hiteraka herinaratra mijanona rehefa mamoaka ilay sarimihetsika miaro.
Ny sarimihetsika fiarovana 2-2-11 dia apetraka amin'ny tampon'ny tontonana fampisehoana ary esorina ny sarimihetsika fiarovana alohan'ny hanangonana azy. Amin'ity fotoana ity, raha ny modely fampisehoana OLED voatahiry mandritra ny fotoana lava dia mety mijanona ireo fitaovana adhesive reside an'ny sarimihetsika fiarovana eo ambonin'ilay tontonana fampirantiana aorian'ny fanesorana ilay sarimihetsika. Raha izany dia esory ny ambiny fitaovana amin'ny alàlan'ny fomba fampidirana ao amin'ny Fizarana 5 etsy ambony.
2-2-12.Raha ampiharina ny onja mandeha amin'ny herinaratra rehefa andoavana ny maodely fampisehoana OLED na rehefa apetraka eo ambanin'ny tontolo iainana avo ny hamandoana, mety ho harafesina ny elektroda ary hitandrina ialao ny voalaza etsy ambony.
Fitandremana fitehirizana 3
3-1 Rehefa mitahiry modely fampisehoana OLED dia ataovy ao anaty kitapo fisorohana herinaratra mijanona ny fahazavana amin'ny hazavan'ny masoandro mivantana na ny hazavan'ny jiro mirehitra. ary koa, ny fisorohana ny avo mari-pana sy tontolo iainana hamandoana avo na tontolo iainana ambany mari-pana (latsaky ny 0 ° C).
Famaritana ny faritra
4. Famaritana Pixel
Note1: Raha ny pixel na ny zana-piksely ampahany dia misy lesoka mihoatra ny 50% ny faritra misy ny pixel na ny zana-piksely izay voa, dia heverina ho kilema1.
Note2: Tsy tokony hisy ny tsy fitoviana hita miavaka amin'ny5% Filter ND ao anatin'ny2 seg fotoana fanaraha-maso.
Note3: Mura sy teboka mamirapiratra nojerena amin'ny alàlan'ny fifindrana ND Filter 5% toy izao manaraka izao.